Akụkụ Rubber, Rubber Extrusion, Rubber Akara - Tianzheng
Xingtai Tianzheng akara Co., Ltd. bụ ọkachamara emeputa nke roba extrusion ngwaahịa tọrọ ntọala na 2010, na emi odude ke Xingtai obodo, Hebei Province China, nso site na isi Beijing na ọdụ ụgbọ mmiri Tianjin.
Anyị nwere R&D kachasị ike na nke dị elu, ndị ahịa na ndị ọrụ mmepụta, karịa ndị ọrụ 100. Companylọ ọrụ anyị nwere teknụzụ pụrụ iche na akụrụngwa ọkaibe. Enwere ike ịmepụta ọtụtụ ihe gụnyere EPDM, PVC, VITON, NBR, SILICON na ibe sponge.
Echichi Mechanical Seal Usoro ntinye nke igwe na-agbanwe di iche na udiri ihe nke igwe na udiri igwe, ma ihe di nkpa ihe di nkpa. Mechanical akara bụ otu n'ime isi m ...
Ihe Ọmụma nke Mkpuchi Mkpuchi Rubber 1. Gini bu ihe nyocha nke ihe mkpuchi roba? 1) Lelee ma ngwaahịa dị ọcha. 2) Lelee ma ngwaahịa nwere vulcanization ntụpọ; 3) Lelee ma ngwaahịa a na-trimming / ed ...
Esemokwu dị n'etiti ngwaahịa ndị a kpụrụ akpụ na ngwaahịa ndị a na-amịpụta na mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe, a na-eji ngwaahịa roba arụ ọrụ. Maka ngwaahịa roba na plastik nke a pụrụ ịhụ n'ebe niile, ...
I nwere ike ịkpọtụrụ anyị nụrụ